VPF yakateedzana yakatwasuka ndiro yefiriji, China VPF yakateedzana yakatwasuka ndiro girazi fekitori Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Square Technology Boka Co, Ltd.
Iyo firiji yeplate firiji inokodzera kutonhora nekukurumidza kwechikafu chakasiyana-siyana, senge hove, shrimp, zvigadzirwa zvenyama, chikafu chechipfuwo, nezvimwewo. Inoshandiswa zvakanyanya muminda yakawanda senge kugadzirwa kwezvokudya zvegungwa, hove yekumhiri kwemakungwa, kugadzirwa kwenyama, uye chipfuwo. chikafu chinotonhora kugadzirisa.
◆ Kurumidza kurodha uye kudzikisa. Kusiyana neiyo yakatwasuka ndiro yefiriji inoda munhu
anoshanda kurongedza chigadzirwa mumatray, vashandi vanogona kudururira pasi chigadzirwa chakakura
yakananga munzvimbo pakati pamahwendefa. Mushure mekugadzirwa kwechando, mabhurosi echando achaita
simudzwa kubva pamahwendefa nema hydraulic maforogo.
◆Iyo yakatwasuka ndiro yefiriji ine simba rakasimba nekuda kwayo pfupi nguva yechando.
◆furemu inogadzirwa nemvura yemugungwa inodziya inopisa-yakanyorova simbi. Iyo isina simbi
furemu inowanikwawo senge sarudzo.
◆Ndiro yepamusoro inotsvedzerera uye forogo yakaputirwa ne PTFE kudzivirira chigadzirwa
kukuvara kana kukwenya.
◆Firiji inogona kushanda neFreon, Ammonia kana CO2.
mhando L1 L2 W1 W2 H1 H2
* Infeed tembiricha: + 15 ℃, yakadzvanywa tembiricha: -18 ℃, tembiricha inotonhora: -35 ℃, nguva inotonhora inoenderana nekutonhora kwese hove
Iyo firiji yeplate firiji inoshandiswa kusunga zvigadzirwa mumabhuroko pamidziyo yekuredza kana pasi. Iyo inokodzera chikafu chakakura sehove, nyama nemiriwo, kana chikafu chemvura senge muto, mukaka, pulp nezvimwe.